बहुसंस्कृतिवादी हुन झन्डा च्यात्नैपर्छ ?
सुजित मैनाली शनिवार, असार ३१, २०७४ 33605 पटक पढिएको
युग पाठकको नयाँ किताब ‘माङ्गेना : नेपाल मन्थन'को उज्यालो पाटो के हो भने यसले बहुसंस्कृतिवादका पक्षमा बहस गरेको छ । जनसांख्यिकलगायत सामथ्र्यप्रति निरपेक्ष भएर देशभित्रका सबै संस्कृतिप्रति समान व्यवहार गर्नु प्रजातान्त्रिक राज्यको धर्म बन्न गएको छ । त्यसैले ‘आधुनिक काल्पनिकीको नेपालमा को अटाउँछन्, को छुट्छन् ? ' भनी पाठकले तेस्र्याएको प्रश्न र ‘नेपालको परिकल्पनामा किन हिमाल, पहाड, झरनामात्र अटाउँछ ? खेत-खलिहान, आँपका टिकोला अझै पनि किन नेपालको परिकल्पनाभन्दा बाहिरै पर्छ ? ' (पृ. १७) भनी नेपाली राष्ट्रको प्रचलित भाष्यविरुद्ध उनले उठाएको सवाललाई बेवास्ता गर्न अब सम्भव छैन । वैकल्पिक भाष्य आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुग्न उनले अघि सारेका प्रमाण र तर्कबारे यो आलेखमा संक्षिप्त टिप्पणी गरिएको छ ।
‘माङ्गेना : नेपाल मन्थन'को प्राण यसको पहिलो लेख ‘नेपाल : एक नक्सा, एक अवधारणा' हो । यसमा पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको आधुनिक नेपाल धार्मिक तथा साम्प्रदायिक ध्येयबाट निर्मित थियो भन्ने पुष्टि गर्न खोजिएको छ । झट्ट हेर्दा शाहवंशको नीतिप्रति असहमति व्यक्त गरेजस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा यसले आधुनिक नेपालको जगलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्ने होइन, अपितु यसलाई समग्रमै अस्वीकार गर्ने नियत राखेको देखिन्छ । गैरहिन्दु धर्मलाई नस्ट गर्नु, यहाँका भाषाहरूलाई खस नेपाली भाषामार्फत विस्थापन गर्नु र सहजातीयलाई मात्रै अवसर दिनु नै आधुनिक नेपालको प्रमुख प्रयोजन थियो भन्ने पक्षमा यसले मत जाहेर गरेको छ । लेखकले भनेका छन्, ‘जब गोर्खाली भनेकै गोर्खा÷पर्वते भाषी, हिन्दु, क्षत्री-बाहुनको एक गठबन्धन थियो; अनि शासन, प्रशासन, सैनिक कुनै पनि राज्यका अंगमा अरू समुदायका मानिस नअटाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो... (पृ. ३३-३४)।'
मगर समुदायसँग गोर्खाली राजाको सम्बन्ध पृथ्वीनारायणको जन्मभन्दा पुरानो हो । हेमिल्टन (१८१९) र भेन्सिटार्ट (१८९६)ले पृथ्वीनारायणलाई मगर भनेका छन् । म मगर हुँ नभने पनि पृथ्वीनारायणले आफूलाई मगरातको राजा बताएका छन् (दिव्यउपदेश, पृ.८) । पृथ्वीनारायणअघिका गोर्खाली राजालाई पनि गोर्खा बार्पाकका गुरुङहरू ‘मगरका राजा' भन्थे र टाढा रहन खोज्थे (बाबुराम आचार्य, श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी, पृ.१०) । पृथ्वीनारायणका ददा (बालबालिकाको हेरचाह गर्ने व्यक्ति) मगर समुदायका सुरथसिंह राना थिए, जो पृथ्वीनारायणले ‘दिव्यउपदेश' दिँदा साथमै थिए (दिव्यउपदेश, पृ. १) ।
गोर्खालीको पक्षमा आउने उनीहरूको मनोदशा पूर्वी र पश्चिमी मोर्चाबाट एकसाथ हमला हुने देखेपछि पराजयको डरले शत्रु खेमामा जाने नाजी जर्मनीका रुडोल्फ हेसकोसँग मिल्दोजुल्दो थियो । एकपछि अर्को राज्य धमाधम विजय गरिरहेको राजाको पक्षमा कमजोर राज्यका बफादारहरू जानु अनौठो कुरा थिएन । कुनै बेला पाटनका भारदारले ‘योग्य राजा पठाइदिनु पर्‍यो' भनी पृथ्वीनारायणसँग आग्रह गर्दा उनले भाइ दलमर्दनलाई पठाइदिएका थिए ।
युग पाठक लेख्छन्, ‘पृथ्वीनारायणले निर्माण गरेको सत्ता क्षत्री-बाहुन वर्चश्वको हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित सत्ता थियो । सेना, प्रशासन, न्याय सबै क्षेत्रमा यही एकल समुदायको पकड स्थापित गर्ने मामलामा पृथ्वीनारायण सचेत थिए ।' (पृ. ६०)
उनले पाखा लगाएका सेन राजाहरू आफूहरूलाई हिन्दुपति भन्ने गर्थे । सेन दरबारसँग निकट किराँती मुखियाहरूको क्षेत्रमा हिन्दुकरणले पृथ्वीनारायणको आवागमनअघि नै तीव्रता पाइसकेको थियो । विजयपुरमा सेन राज्य स्थापना हुनुअघिका कोच राजा (? ) विजयनारायणले एकजना किराँती मुखियालाई ‘गाई खाने फोहोरी राक्षस भएको र हिन्दु महिलालाई अपवित्र बनाएको हुनसक्ने' भन्दै हत्या गरेका थिए । ती किराँती मुखियाका छोरा बजहाङ राईले बाबुको हत्याको बदला लिन लोहाङ सेनलाई विजयपुर सर गर्न सघाए । लोहाङ विजयी भएपछि उनले बजहाङका छोरालाई मन्त्री बनाए । नयाँ मन्त्रीले ‘हाङ' उपाधि त्यागे र संस्कृत नाम विजयचन्द्र ग्रहण गरे (कुमार प्रधान, पृ. ७१-७३, ८७, १२४) ।
त्यस्तै सेना, प्रशासन, न्याय सबै क्षेत्रमा बाहुन-क्षेत्री इतरकालाई नलिने पृथ्वीनारायणको नीति थिएन । द्रव्य शाहकै पालामा गंगाराम राना न्याय विभागका अधिकारी बनेका थिए (बाबुराम आचार्य, पृ. १२) । राम शाहका पालामै मगरहरू उच्च पदमा नियुक्त हुन थालिसकेका थिए । पृथ्वीनारायणले अमर घलेलाई बार्पाकको उमरा नियुक्त गरेका थिए । काठमाडौंको शिवपुरी डाँडा कब्जा गर्ने गोर्खालीमा देव्या गुरुङ पनि थिए, जो शत्रुको तिघ्रा छनक्कै छिन्ने गरी जोरसँग खुँडा-खुकुरी चलाउनमा कहलिएका थिए । पृथ्वीनारायणकै पालामा सिन्धुलीगढीबाट अंग्रेजलाई धपाउने गोर्खाली फौजमा सर्दार वंश गुरुङ पनि थिए, जसले पाँच सयजति सैनिकको नेतृत्व गरेका थिए (जगमान गुरुङ, पृ. ११, १३ र १९) । पृथ्वीनारायणको पालामा गोर्खाली पल्टनमा तीनजना मुसलमानलाई पल्टनको माथिल्लो पद एड्जुटेन्ट दिइएको थियो (प्रेमसिंह बस्न्यात, शाही नेपाली सेना र प्रधान सेनापतिहरू, पृ. ४) । पृथ्वीनारायणको पालाका शक्तिवल्लभ अज्र्यालकृत नाटक ‘जयरत्नाकर'मा नेपाली पल्टनमा बाहुन, खस, मगर, बौद्ध र नेवार सिपाही थिए भन्ने उल्लेख भएबाट पनि त्यति बेलाको गोर्खाली पल्टन बहुजातीय थियो भन्ने देखिन्छ (दिनेशराज पन्त, पृ. ४५-४६ नेपाली सेनाको इतिहास, सं. मलराज सिंह राठौर) ।
न्याय व्यवस्थामा पनि पृथ्वीनारायणले विभिन्न जातजातिलाई समावेश गराउने नीति लिएका थिए । ‘ठकुरी जाँची डिट्ठा राख्नु, मगर जाँची विचारी थाप्नु, कचहरीपिच्छे एक एक पण्डित राखी शास्त्रबमोजिम अदालत चलाउनु,' उनले भनेका थिए (दिव्य उपदेश, पृ. ८) । सरकारी सूचना फुक्ने र प्रहरीको काम पनि गर्ने कटवाल जनजाति र क्षेत्रीलाई बनाउने थिति त्यति बेला थियो (बाबुराम आचार्य, पृ. ४४९) ।
युग लेख्छन्, ‘इतिहासकारहरूका तमाम कोसिसका बाबजुद नेपाल प्राचीनकालमा विशाल नै थियो भन्ने ठोस प्रमाण कसैसँग पनि छैन । न ‘प्रयाग प्रशस्ती'मा तत्कालीन नेपालको सिमाना उल्लेख छ, न त चाँगुको अभिलेखमा नै (पृ. २४) ।'
महेन्द्रको पालामा भएको भूमिसुधारबारे टिप्पणी गर्दै पाठक लेख्छन्, ‘(मधेसी जमिनदार)हरूसँग जोडिएका अरू किसान परिवार एउटै घरका भित्ता, छानाजस्ता थिए... त्यसैले हदबन्दीका नाममा कुनै जमिनदारको जमिन खोस्दा बाँकी परिवार स्वत: भूमिहीन सुकुमबासी भए (पृ. ११३) ।'
‘माङ्गेना : नेपाल मन्थन'को विकाससम्बन्धी लेखभित्रको ‘किसानको चीरहरण' खण्ड मार्मिक छ, जहाँ तराईका रैथानेहरूको जमिन पर्वते जमिनदारले तिकडम गरेर हडपेको पनि उल्लेख छ, जुन सत्य हो । तर, यस्तो कुकर्मबाट मधेसी जमिनदार पनि अछुतो थिएनन् । तर, यो सत्यलाई लेखकले बेवास्ता गरेका छन् ।
पुस्तकमा टिप्पणी गर्नुपर्ने विषय थुपै्र छन् । नेपाली भाषालाई माध्यम बनाएर नेपाललाई एकताबद्ध गर्ने प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्ने लेखक दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले नेपाली भाषालाई ‘युनाइटिङ फ्याक्टर' बनाएकोप्रति पनि रोष व्यक्त गर्छन् । तर, हिन्दी भाषामार्फत मधेसी राजनीतिलाई दह्रोसँग बाँध्नुपर्ने पक्षमा चाहिँ उभिएर दोहोरो चरित्र देखाउँछन् । खस भाषाले नेपाल भाषालाई कमजोर पारेकामा उनको चित्त दु:ख्छ । तर, कुनै समय सेन राज्यले किरातीहरूसँगको अन्तरक्रियामा सम्पर्क भाषा बनाएको मैथिलीलाई (कुमार प्रधान, पृ. ८८) हिन्दीले खाइरहेको अवस्थाले चाहिँ उनलाई पिरोल्दैन ।
धनकुटामा 'निषेधाज्ञा' र 'आमहड्ताल' जारी 909